News - Okpomọkụ na-ekpuchi mkpuchi mkpuchi
Iji dozie nsogbu nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n'oge oyi, nhọrọ mbụ na ụbịa na udu mmiri-karama thermos
Ná ngwụsị ọnwa Septemba, ihu igwe na-atụ oyi ozugbo, a ga-enwekwa oge oyi kwa ụtụtụ na anyasị. N'ezie, na mgbakwunye na iyi uwe ọzọ, ị attentiona ntị na ikpo ọkụ nwere ike idozi nnukwu nsogbu. N'oge a, anyị nwere ike ịhọrọ mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ karịa mmiri oyi oyi, ọkachasị n'oge mgbụsị akwụkwọ mgbe ọ na-ekpo ọkụ na oyi. E nwekwara ọtụtụ karama thermos dị n'ahịa. Enwere ike ịsị na ha dị iche iche. Yabụ enwere ụkọ thermos nke na - ejikọ mkpuchi ogologo oge yana obere ọrụ na - adịgide adịgide?
Igwe anaghị agba nchara igwe na-egbo mkpa m niile maka ihe ọkụ ọkụ. N'ihe gbasara agba agba, enwere otutu agba ịhọrọ na enwere ike ịhazi ya. Atụmatụ ụcha dị ọcha nwekwara ike ime ka amata ma zere mmejọ. N'otu oge ahụ, teknụzụ pearlescent dị n'elu na-eme ka ogo karama ahụ dịkwuo mma, ọbụlagodi na ejighị ya, ọ ga-adị mma na tebụl.
Ogo ya dịkwa mma, nke dị elu nke 235mm na dayameta nke 65mm, enweghị nsogbu na-ebu ya kwa ụbọchị. A na-achịkwa ibu ahụ na ihe dịka 180g, nke dị iche na ịdị arọ nke ekwentị mkpanaaka anyị na-ejikarị. Site na nhọrọ nhọrọ nke 300 ~ 500ml, ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dịkarịa ala, otu oge ị na-a ofụ kọfị nwere ike izute ị drinkingụ ọtụtụ ndị mmadụ.
N'ezie, ụkpụrụ nke karama thermos bụ ihe dịka otu, ha niile na-eme ka mkpuchi mkpuchi ahụ ka mma site na ịbawanye ikuku. N'ezie, karama thermos a abụghị ihe ọzọ, mana enwere ike ịsị na ọ bụ ihe kachasị na mkpuchi. Kalama thermos a nwekwara ọrụ nnọchi batrị ọhụrụ, nke nwere ike nyochaa ma chịkwaa okpomọkụ nke karama ahụ n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, ma nweta ihe kachasị na mkpuchi.